Alahady Trinite masina 31/05/2015 : Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Antsoin’Andriamanitra hiray fianakaviana aminy isika.
Antsoin’Andriamanitra hiray fianakaviana aminy isika, io no mamintina ireo tenin’Andriamanitra aroson’ny Fiangonana amintsika amin’izao alahady fankalazantsika ny fetin’ny Trinite Masina izao, androany ihany koa araka ny calandrier liturgique dia fetin’ny visitation na ny famangian’I Masina Maria an’I Mb Elisabeth rahavaviny.
Fetin’ny Trinite Masina, dia io Evanjely io no hasiantsika teny satria ny vakiteny voalohany dia mampiseho ny halebiazan’Andriamanitra satria izy no niteny tamin’ny vahoaka. Ao amin’ny vakiteny faharoa no ilazana fa ny Fanahim-pananganan-janaka no noraisintsika ka ahafahantsika miantso hoe Ray, Aba an’Andriamanitra tahaka an’I Jesoa. Ny vakiteny fahatelo dia ny resaka farany nataon’I Jesoa tamin’ireo mpianany talohan’ny nialany tamin’izao tontolo izao.
Raha tsaroantsika tsara tamin’ny Paka dia ireo vehivavy Masina tonga tany amin’ny fasana no nafaran’I Jesoa hoe asaivo mankany Galilea ny mpianatro fa any aho no hihaona amin’izy ireo, dia nony tonga tany Jesoa no nihaona farany ary nanafatra hoe; “mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina”. Misy fehezanteny dimy ao, ireo no teny nataon’I Jesoa farany nialoha ny nialàny tamin’izao tontolo izao. “Mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova Batemy azy amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo ary indro aho eo aminareo mandrakariva mandra-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao”. Fehezanteny mamintina ny fiainan’I Jesoa sy ny fampianarany manontolo (Md Matio 28). Misy iraka ao, irahana isika tahaka an’ireo Apôstoly izay nirahina. Mampianara ny firenenana rehetra, any Galilea no fisokafana amin’ny firenena rehetra. Manaova Batemy azy amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ny Batemy dia tsy maintsy amin’ny anaran’ny Trinite Masina no anaovana azy (formule Trinitaire), raha tsy izay dia tsy vanona ny Batemy, ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo; ny fitiavana no nandidian’I Jesoa ireo mpianatra, io no mamintina ny didy rehetra. Fitiavana ny namana sy fitiavana an’Andriamanitra. Didy tokana io, raha tadidintsika dia nisy olona naka fanahy an’I Jesoa ka nanao hoe inona no voalohany indrindra amin’ny didy rehetra dia hoy I Jesoa: tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra, ny faharoa dia tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Ary farany dia ny hoe; indro aho eo aminareo mandrakariva mandra-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao, vao manomboka ny Evanjelin’I Md Matio dia ny anjely nilaza tamin’I Md Josefa dia hoy izy hoe Emanoela no atao anarany. Izay midika hoe Andriamanitra eto amintsika, raha mifarana ny Evanjelin’I Md Matio dia io ny tenin’I Jesoa “indro aho eo aminareo mandrakariva mandra-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao”. Ny mampifandray ny Ray, Zanaka sy Fanahy Masina dia ilay fitiavana. Andriamanitra eo amintsika mandrakariva. Dia modely isika ao anatin’ny fianakaviana, ao misy Ray sy Reny ary zanaka. Ny fitiavana no mampifandray ny mpianakavy ka raha tsy eo ny fitiavana dia afo be ny fiainana. Ny olona miaina ny fitiavana no afaka mahatsapa ny Trinite Masina.
Androany moa dia andro natokana ho an’ny Reny rehetra ka anjarantsika raim-pianakaviana ny misaintsaina ny zavatra zakain’ny Renim-pianakaviana ao an-tokantrano ao. Dia mivavaka ary mankahery anareo renim-pianakaviana rehetra.